Xiisad ka taagan Xadka Somalia & Kenya. | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Xiisad ka taagan Xadka Somalia & Kenya.
Xiisad ka taagan Xadka Somalia & Kenya.
Wararka ayaa tilmaamaya in Xiisad ay ka taagan xadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ee u dhow magaalada Mandheera kaddib markii halkaas la keenay ciidamada dowladda Soomaaliya, sida uu shaaciyay Wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa dalka Kenya.
Warkan ayaa soo baxay saacado kaddib markii dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday inay xiriirkii diblomaasiyadeed u jartay dhiggeeda Kenya, ayna ku amartay dhammaan diblomaasiyiinta reer Kenya in ay Soomaaliya uga baxaan muddo 7 maalmood ah gudahood.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka, oo uu soo xigtay Wargeyska Daily Nation – oo ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer Kenya ayaa sheegay inay arkeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo isku diyaarinaya goobo muhiim ah oo ku yaalla xadka u dhaxeeya labada waddan.
“Waxaan ku waabariisannay ciidamo meliteri ah oo xadka jooga. Arrintan aad bay noo cabsi galisay,” ayuu yidhi Mid ka mid ah dadka deegaanka oo uu wargeyska soo xigtay.
Dadka aaggaas ku dhaqan qaarkood ayaa lagu soo warramay inay ka tageen halkaas iyagoo ka cabsi qaba inay khatar ku timaado.
Sargaal sare oo katirsan ciidamada amaanka Kenya ee ku sugan Mandheera oo magaciisa qariyay ayaa xaqiijiyay in ciidamada Soomaaliya ay xuduudka tegeen, sida uu shaaciyay wargeyska Daily Nation.
“Waxaan helnay xogta ku saabsan waxa ka socda xadka laakiin arrintaas waxaa go’aankeeda gaaraya saraakiisha sar sare ee ku sugan magaalada Nairobi,” ayuu yidhi.
Ma jiro wax war ah oo ay Dowladda Soomaaliya kasoo saartay arrintan, mana jiraan saraakiil dhinaca Soomaaliya ah oo xaqiijiyay tallaabadaas lasoo tabinayo.
Maqaal horeBeesha Caalamka oo ka hadashay Gudiga Doorashada.
Maqaal XigaRW.Rooble oo dhagax dhigay dhismaha Garoonka Dhusamareeb.